LACAGTA CAGAARAN EE CASAANKA (PORCHEK) EE XILLIGA QABOOBAHA EE GURIGA: CUNTO KARIYE FUDUD - MAQAALLO
Xilliga jiilaalka, jidhku wuxuu ku yar yahay fiitamiinada, iyo si uu u buuxiyo sahaydooda, waxaan ku faraxsanahay inaan furno fasaxyada xagaaga: karinta, casiirka, jajabyada, ilaalinta, jelliyada. Dhanka kale, macaanka 20% ee qaddarka bilawga ah ee fitamiin C ayaa sii ahaan doona, halka diyaarinta miro kulul la yareeyo kulaylka iyo ilaalinta fitamiinada si ka fiican, ka sokow, kuleylka wakhtiga gaaban waxaa loogu talagalay in laga saaro hawada sheyga iyo burburinta habka enzim ee oksidiyada fitamiinada. Maantana waxaan ku falanqeyn doonaa sida loo sameeyo leyliska lafdhabarka cas ee casaanka leh ee jiilaalka.
Ku saabsan faa'iidooyinka ka mid ah qasabka currant cas
Cuntada ugu muhiimsan ee cabitaanka ayaa ah currants. Dabcan, waxaa fiican in la isticmaalo karinta badeecada taas oo ku jirta maadada fitamiinada ay ka sareyso.
Ma taqaanaa? Dareemaha lacagaha ayaa ka saaraya dheecaanka xad-dhaafka ah ee jidhka, wuxuu yareeyaa bararka, wuxuu hagaajiyaa rabitaanka cuntada, wuxuuna saameyn ku yeelanayaa metabolismka. Iyadoo ujeedada daaweynta loo isticmaalo ma aha oo kaliya berry, laakiin sidoo kale caleemo currant.
Waxyaalaha fitamiinada ayaa saameeya:
Baaxadda ee berry - ka badan oo bislaado, sareeya content. Intaa waxaa dheer, haddii miraha la tirtiro, xaddiga fiitamiinadu waxay bilaabmaysaa inay hoos u dhacdo.
Waxyaabaha Ascorbic acid ee hawada cad waxay ka badan tahay daruuraha. Isticmaal walxo cayriin ah oo la qaado maalinta cadceeda.
Fitamiin badani waxay bilaabaan inay burburaan marka hawada lagu qulqulayo. Isticmaal alaabta ceeriin ah isla maalintaas marka berry la goosto.
Currant casriga ah waxaa ka mid ah:
250 mg oo fitamiin C ah;
Fitamiin B: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9;
Maalin walba qaadashada fitamiin C - 50-100 mg. Ma aha mid ku urursan jirka, sidaas darteed cabitaanada currant waxay noqon doontaa il heer sare ah oo fitamiin C ah xilliga jiilaalka. Qoyaanka Vitamin ee currant cas ayaa leh saameyn ku leh wadnaha iyo xididdada dhiigga. Maaddaama uu content pectin sare, berry waa u fiican nidaamka dheefshiidka.
Waa muhiim! Currant laguma talinayo dadka qaba xanuunka xinjirta dhiigga. Vitamin K iyo xeryahooda phenolic waxay kicin karaan kororka xinjirta dhiigga.
Marxaladda diyaarinta diyaarinta qalabka wax soo saarku waxay u baahan yihiin in la shaqeeyo: si loo kala saaro, loo kala saaro, lagu dhaqo. Kala saar berry ka soo asliga ah, ka saar caleemaha. Si aad uga saarto caleemaha yaryar iyo saqafyada, ku daadi currant biyo: qashin iyo miro la jarjaray ayaa ku fiiqi doona biyaha dusha sare, oo si fudud ayaad u kala soocaan miraha nadiifka ah. Mar walbana mar waligaa dhaq.
Cabitaanku wuxuu ku xiran yahay dhalooyinka saddex-litir ah. Si aad u diyaarsato caanaha, raaci bareesada si fiican oo soodhaw leh oo doorbidan nadiifinta.
Ma taqaanaa? Soodhaha ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah maaddooyinka ugu wanaagsan ee lagu maydho weelasha ilaalinta: waxay ka dhigtaa wax raadin ah oo urin, waxay ka saartaa wixii faddaro ah si fiican. Soodhaha laga soo saaro harooyinka soodhaha. Sanadkii 1736-kii, farmashii Faransiiska Henri de Monceau markii ugu horeysay ee laga helo soodhad saafi ah oo ka soo gudubta soodhada.
Inta badan bangiyada ayaa la nadiifiyey laba qof. Si arrintan loo sameeyo, ku xiri digsi biyo leh karkaraya, oo bangiga ku rid bogga. Waqtiga dhalmada ee saddex-litir waa 10-15 daqiiqo. Qaabka labaad ee sterilization - foornada. Heer kulka - 160 ° C. Sameynta bangiyada waqti - in la qalajiyo dhibcaha biyaha. Ujeedada nadiifinta waa in looga hortago hababka hargabka. Ilaha halsano waxaa laga heli karaa wasakh aan la shaacin ama berry qallalan. Haddii aad hubto in bangiyada si fiican loo dhaqay iyo miro la farsameeyo, markaa waxaad samayn kartaa habkan.
Daboolka ayaa la kariyaa ka hor intaan la saarin qasacadaha. Waqti karkari - 1 daqiiqo.
Baro sida loo sameeyo macaanka currant cas iyo macaanka.
Isticmaalida diyaargarowga cabitaanka khamriga:
dhalooyinka iyo daboolka;
mishiinka wax lagu xiro;
awood u lahaanshaha qalabka cayriin;
Wixii diyaarinta bacriminta berry isticmaalay maacuunta birta stainless ama dhaldhalaalka, iyada oo aan chips.
Waa muhiim! Birta aan qabyada lahayn ma fal celin asiidhka oo sidaas awgeed waa sahlan tahay in la isticmaalo. Dhar dhuxul leh oo dhalaalay ayaa waxyeeli kara asiidhka, ka dibna walxaha birta ayaa ku dhici doona khariidadada, taas oo horseedi doonta hargabka iyo khalkhalka cabitaanka.
Wixii 1 kg ee berry waa in la qaataa:
2 litir oo biyo ah;
300 g oo sonkor ah;
20 g of citric acid.
Waayo, jecel yihiin wax aad u macaan, waxaad kordhin kartaa saamiga sonkorta ilaa 500 g
Ku buuxi dhalooyinka nadiifka ah ee nadiifka ah ee berry ah illaa badh awoodda.
Si aad u diyaarsatid compote-ka iyadoo la adeegsanayo laba hab:
Sharoobada sharoobada. Si gooni ah, digsi, sharoobada waxaa laga diyaariyey biyo, sonkor iyo citric acid. Waqti karkarinta - 5 daqiiqo, si fiican u kala dillaac sonkorta. Sharoobada kulul waxaa lagu shubay berry iyo daboolida duudduuban.
Iyadoo ladilayo horudhac. Berry ee bangiyada waxaa ka buuxsamay biyo karkaraya. Marka bangiyada ay diirran yihiin, dareeraha soo baxay ayaa ku shubay digsi, ku dar sonkorta iyo citric acid. Karkari muddo 10 daqiiqo ah iyo ku shub berry oo leh sharoobada.
Nadaafaddu waxay burburisaa enzymes taasoo keenta inay hoos u dhigto alaabta ceeriin ah. Intaa waxaa dheer, berry blanched siin casiir si cabitaan wanaagsan oo lagu qooyay macaan ka badan berry ee sharoobada.
Waa muhiim! Tara waxaa laga buuxin karaa miraha ilaa qoorta, laakiin xusuuso in shubidda ay si buuxda u daboosho berry. Berry badan - ka badan oo ah fiiro gaar ah ee cabitaanka.
Video: Cannabeeyaha casaanka ee casaanka ah
Maxaa lagu dari karaa dhadhanka iyo ariga
Si dhadhan loona bedelo dhadhanka wax lagu kariyo, waxaad ku dari kartaa wax yar oo dhir udgoon. Clove iyo naanaystuhu waxay siiyaan dhadhan wanaagsan, iyo jeexjeexda liinta waxay ku buuxinaysaa cabitaanka dhadhanka iyo carafka miro dhab ah.
Isku day inaad ku karsato jiilaalka jiilaalka ee jeeriga, buckthorn badda, strawberries, khudaarta, malab, jeeriga.
Maxaa la isku dari karaa hal bangiga
In diyaarinta compote waxaa loo isticmaali karaa dhowr nooc oo qalabka ceeriin: waxaa habboon in lagu daro currants cas iyo caddaan ama currants cas oo isku dhafan leh tufaax, strawberries, gooseberries. Isku-dhafka cusub ee dhadhanka ayaa ku daraya kala duwanaan miiska jiilaalkaaga. Inta badan, saamiga noocyada kala duwan ee alaabta ceeriin ee 1: 1 compote waa la hayaa - hal qayb oo ka mid ah currant cas ayaa laga qaaday qayb ka mid ah currant cad. Wixii kaabashka currant iyo tufaaxa, tufaaxa waxaa loo tixgeliyaa qaybta ugu weyn, sidaas darteed saamigoodu waa kala duwan yahay cuntooyinka kala duwan 1: 1 illaa 1: 2 - 2 qaybood oo tufaax ayaa loo qaataa hal qayb oo ka mid ah currantka.
Baro cuntada sida loo diyaariyo strawberries (macmacaanka, dhaxan), miro la jarjaray, salad, marmeley, khamri), tufaax ("shan daqiiqo" macaanka, malmal, tufaax leh caano cufan, casiir, khal, la kariyey).
Sidee iyo meesha lagu keydsanayo shaqada
Badanaa, ilaalinta waxaa lagu kaydiyaa meel qalalan oo mugdi ah. Marka la eego aqalka - waa gantaal. Guri dalka ka mid ah wuxuu noqon karaa maqnaansho. Waa in la xusuustaa in qoraxdu ay dedejiso geeddi-socodka kiimikada, sidaas darteed meel mug leh oo mugdi ah waa lagama maarmaan.
Waxaa lagula talinayaa in aad isticmaasho kabadan hal sano, sida kaydinta muddada dheer ay si xun u saameyneyso maadada fiitamiinada ee shaqada. Sidaa daraadeed, waxaa haboon in la soo xiro bangiyada oo la ilaaliyo sanadka si loo ilaaliyo ilaalinta xilliyadii hore ee hore. Heerkulka kaydka ee ugu wanaagsan ee biilasha waa laga bilaabo +4 ilaa + 15 ° S.
Sidoo kale akhri oo ku saabsan banaanbaxa currant madow: macaanka ("shan daqiiqo"), qabow), tincture, khamri.
Isku darka ayaa ah meesha laga helo fitamiinada oo aad muhiim u ah xilliga jiilaalka, sababtoo ah ma isticmaalaan kuleylka mudada dheer, taas oo horseedaysa hoos u dhac ku yimaada waxyaabo faa'iido leh. Cuntadani waxay ka caawineysaa inaad diyaariso cabitaan kaas oo magdhow siinaya la'aanta fiitamiinada xilliga qaboobaha oo kuu xusuusin doona xagaaga.